Mihena nefa mihinan-kanina
Te hihena nefa mihinanan-kanina ?
Mila hery ny vatana ary avy amin’ny sakafo hanintsika no hangalany izany hery ilainy izany. Nefa rehefa miohatra ny ilainy ny hery omentsika azy dia ho tahiriziny amin’ny endrika tavy iny. Izay no mampatavy.
Mihinana miohatra ny ilain’ny vatana isika rehefa mihinana nefa tsy noana akory na efa tsy noana intsony.
Efa nihinan-kanina teo am-pijerena horonan-tsary na vaovao an-tsary ve ianao, nefa tsy miraharaha ny fatran’ny hanina nohaninao tamin’izany ? Efa nisesika sokola na glasy na mofo na sakafo hafa, tamin’ianao nalahelo na kivy ? Efa nihinana caca pigeon ohatra ve ianao satria tsy tantinao ny naheno ny fofon’ilay izy tamin’ny nihinana azy ny mpiara-miasa na mpiara-mianatra aminao ? Raha « ENY » ny valin’ny iray na izy rehetra mihitsy amin’ireo fanontaniana rehetra ireo, mihinan-kanina tsy amin’ny hanohanana ianao ary hatavy na ho ela na ho haingana raha tsy hoe efa matavy.
Tsaroako ny nidirako tamin’ny asako vaovao. Nihena ny stress-ko satria tsy dia betsaka ny teritery nataon’ny lehibe, sady efa tafaverina teto Antananarivo ny sipako rehefa avy niasa tany Avaratra tany. Nefa, noho ny fitiavako ny sipako dia mba te hampiaraka matetika e ! Noho izany, najanoko tanteraka ny nail art (na onglerie) sy ny fiantsenana matetika izay fanaoko mba nialako voly tamin’ny tsy nahateo azy. Noho izany, zara raha mba manam-potoana mba hikarakarana ny tenako aho mandritra ny faran’ny herinandro. Tany am-piasana rahateo koa, nanomboka leo aho satria mora mankaleo be ny asako. Ie, mankaleo haingana dia haingana ny comptabilité amiko. Mba hampitoniako ny saiko, sy hialako voly dia naleoko nihinana donaty (donuts). Tsara anie izy ireny e ! Nahazo aina ery aho nihinana azy, nahatsiaro tena ho sambatra ery. Sady lasa fahazarana ihany koa ny fihinana na iray fotsiny aza isan’andro. Indray andro aza, nahavita nihinana 5 aho. Ny fiasako rahateo koa nanome anay zava-pisotro misy gaz isaky ny amin’ny ora fisakafohanana atoandro, rehefa alatsinainy sy zoma. Dia nisotro re aho. Satria tsy nisy an’ireny tany an-trano. Izay no nampatavy ahy.
Misy ny hiteny ahy fa miadana no nampatavy ahy. Ny sasany indray hiteny fa nihinana mamy be loatra tamin’ny donaty sy ny zava-pisotro misy gaz aho. Nefa ny tena antony marina dia ny fihinanako donaty mba hanalako voly sy hahazoako aina amin’ny tsirony tsara be, sy ny fihinanako izany donaty izany noho ny fahazarana fotsiny. Ary ny fisotroako zava-pisotro misy gaz satria nozaraim-potsiny ireny tany am-piasana, sady maimaim-poana. Fa tsy hoe noana akory aho na mangetaheta, ny antony nihinanako sy nisotroako izany. Lasa hery miohatra ny nilain’ny vatana izany ireny dia lasa nangonin’ny vatako … ho tavy. Mahay lesona tsara kosa nareo izany an !
Inona izany no mampihena ?
Noho izany, raha te hihena dia mila mihinana amin’ny hanohanana. Izany hoe : mihinana rehefa noana ary mijanona tsy mihinana intsony rehefa tsy noana intsony. Izany hoe : tsy mihinan-kanina satria tiana ny mihinan-kanina, tsy manery tena handany ny eo am-bilia, tsy mihinan-kanina satria tsara fotsiny ny sakafo, tsy manery tena hihinana sakafo satria mampihena na mampahia hono io nefa tsy noana akory, tsy manery tena handany ny sakafo satria maimaim-poana, …
Rehefa tsapa fa feno be ny kibo dia efa niohatra be ny tokony nilaina nohanina izay. Ary izay no mampatavy.
Mora kely izany raha teoria fotsiny nefa raha hampiharina dia sarotra be.
Eo am-piandrasana ny famehezanao ny famantarana fa noana ianao, ireto misy fomba fisakafohanana izay mahakasika ny fomba fisakafohanana.
1. Mihinàna amin’ny vilia kelikely kokoa
Efa zatra ny mandany ny eo am-bilia foana isika. Avy tamin’ny fitaizana izany : terentsika ny ankizy tsy hamela sisa fa tsy mahalala fomba izany, na satria misy olona tsy mihinan-kanina any. Nefa ny fandaniany an’iny anefa tsy hanampy ilay olona tsy misakafo akory. Ary tsy am-piheritreretana na am-piraharahiana ny hanohanana no hanaovantsika izany. Izany hoe, mihinan-kanina tsy am-piraharahiana fa tsy mila iny hanina iny intsony ny vatantsika.
Efa zatra ny mameno ny viliantsika ihany koa isika, noho ny tahotra fa tsy ho voky raha tsy manao an’izany.
Noho izany antony 2 izany no tokony hihinanana anaty vilia kelikely kokoa : mba hamitahana ny maso tendan-kanina sy hiadiana amin’ny fahazaran-dratsy. Na dia fenoina aza iny vilia kely iny, tsy hisy sakafo maro be toa ny vilia fihinananao isan’andro rehefa fenoina. Mba hahafahanao mametra ny haninao izany.
Mampiasà vilia fihinanana desera na assiette à dessert ohatra.
2. Misotroa rano mandrapahatongavan’ny pipianao hiloko mavo mitopy fotsy na tsy miloko mihitsy
Tsy misy mahalala ny tena fatran-drano tokony hosotroiny isan’andro satria samihafa avy isika rehetra. Noho izany, mila misotro rano izay mahampy mba hahatongavan’ny pipianao hiloko mavo mitopy fotsy na tsy hiloko mihitsy. Noho izany, raha miloko mavo matroka dia « déshydraté(e) » ianao izany. Ary raha miloko volon-tany dia mila mijery dokotera ianao fa marary izany.
Fantatrao ve fa rehefa déshydraté(e), izany hoe tsy ampy rano ny vatana, dia lasa mitady rano any amin’ny tahiriny izy. Ary rehefa misotro rano amin’izay ianao dia hotahiriziny iny rano iny mba hahafahany miatrika ny tsy fahampian-drano manaraka. Izay no antsoina hoe « rétention d’eau ». Io rétention d’eau io dia mahatonga ny olona ho be kibo. Izay no antony tokony hisotroina rano.
Tsara kokoa raha misotro rano 30 minitra alohan’ny hisakafohanana sy adiny 1 aorian’ny nisakafohanana. Fa maninona ? Elastika ny vavony. Toa ny balôm izay mitovy habe amin’ny totohondry mivonkina. Rehefa fenoina izy, na rano io na sakafo, dia mitombo habe mba hahafahanao mahalany an’iny rehetra iny. Rehefa misotro rano alohan’ny hisakafohanana ianao dia efa mameno azy sahady. Tsy miraharaha izy na feno rano na sakafo. Rehefa feno ny azy dia feno. Noho izany, tsy hanosika anao hihinan-kanina be izany. Ary ny fisotroana rano adiny 1 aorian’ny sakafo dia mameno azy ihany koa, mba hahatonga anao ho fenofeno mandrapahatongavan’ny sakafo manaraka.